Helsinki waxay bilaabaysaa inay siiso maaskarada wajiga dadka dhaqaale ahaan liita | City of Helsinki
Tirada cusub ee cudurka korona fayraska ayaa korodhay bishii Ogoosto. Mac'hadka Caafimaadka iyo Daryeelka ee Finland (THL) wuxuu kugula talinayaa ku isticmaalida maaskarada wajiga gaadiidka dadweynaha iyo xaaladaha kale ee ay suurtagal ahayn ama adag tahay in laga fogaado is taabasho dhow. Dawladdu waxay ku dhawaaqday in dawladaha hoose ay tahay inay ugu diyaariyaan maaskarada wajiga degganeyaasha aadka u nugul si lacag la’aan ah.
Magaalada Helsinki waxay bilawday inay ugu qaybiso maaskarada wajiga dadka danyarta ah goobaha qaybinta ee furan markay ahayd Jimcaha, 21-da Ogoosto saaxada 10-ka subaxnimo. Jilaayaasha hay'adaha saddexaad ee la shaqeynaya degganeyaasha aadka u nugul ayaa sidoo kale la siin doonnaa maaskarooyin si loo qaybiyo.
Tan iyo Arbacadii, 19-ka Ogoosto, maaskarooyinka waxaa qaybinayay adeegyada bulshada iyo daryeelka caafimaadka ee magaalada inta lagu gudojiray la xiriirida macaamiisha. Hadda, qaybinta ayaa ku sii fideysa goobaha cusub ee qaybinta ee ay maamusho magaalada, xarumaha gargaarka cuntada iyo guryaha masaajida/kaniisadaha iyo ururrada.
Talo-bixinta THL ee isticmaaka maaskarada wajiga waxay khuseysaa dadka ka weyn 12 sanno jir, sidaas darteed qaybinta maaskarooyinka waxaa lagu bartilmaameedsanayaa isla da'daas.
Goobaha qaybinta maaskarada wajiga ee Helsinki
Liistada la cusbooneysiiyay ee goobaha qaybinta maaskarada ee Helsinki iyo saacadaha ay furan yihiin waxaa laga heli karaa mareegta magaalada ee hel.fi/kasvomaskit:
Mabda' ahaan, degganeyaasha oo dhan waxay mas'uul ka yihiin isticmaalka maaskarada wajiga ee u goonida ah, helida maaskarada iyo kharashaadka ka dhasha. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dhaqaale ee qofna ma aha inay caqabad ku noqoto u hoggaansanaanta talo-bixinta. Qaybinta maaskarooyinka waxay ku saleysan tahay aaminaad. Degganeyaashu uma baahna inay caddeeyaan inay dhaqaale ahaan liitaan ama inay u baahan yihiin maaskaro lacag la’aan ah marka la joogo goobaha qaybinta.
Magaaladu waxay abaabushaa qaybinta maaskarada wajiga iyadoo la kaashanayo masaajida/kaniisadaha Helsinki iyo Ururka Laanqayrta Cas ee Finland. Qaybinta waxaa sidoo kale suurtogaliyay dhowr ururo oo samafal ah, sida Hurstin Apu iyo Myllypuron elintarvikeapu.
Soojeedinta isticmaalka af-shareerka ee muwaadiniinta (26.8.2020)
Isticmaalida maaskarada wajiga waxay u baahan tahay taxaddar
THL waxay ku talineysaa ku isticmaalida maaskarada gudaha gaadiidka dadweynaha, marka loo jeedo baarista korona fayraska iyo marka laga soo laabto waddan halis badan ka jirto oo lagu soo laabanayo Finland. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in lagu isticmaalo maaskaradagoobaha dadwaynaha mararka ay jiraan xaalado kale kuwaasoo ay adag tahay taabashada dhow in laga fogaado.
Waa muhiim in maaskarada wajiga loo isticmaalo si sax ah. Macluumaad dheeraad ah iyo hagis waxaa laga heli karaa